Fanafihana tobin-dasantsy teny Anosy : Polisy iray nidoboka eny Tsiafahy -
AccueilSongandinaFanafihana tobin-dasantsy teny Anosy : Polisy iray nidoboka eny Tsiafahy
Fanafihana tobin-dasantsy teny Anosy : Polisy iray nidoboka eny Tsiafahy
Mpitandro filaminana iray miasa eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka eny Anosy no nadoboka am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy omaly hariva, rehefa avy natolotra teo anatrehan’ny fampanoavana, noho ny resaka fandrobana vola tamina tobin-dasantsy iray eny Anosy. Ny alakamisy alina tokony ho tamin’ny 08 ora tany ho any no nitrangan’ity asa ratsy nataona manam-pahefana nanao fanamiana sivily ary nirongo basy ity. Araka ny loharanom-baovao marim-pototra, dia ity polisy am-perinasa ity irery ihany no nanatanteraka io asa fanafihana io. Nanatona ilay “pompiste” toa ireny mpividy ity farany, ka tsy taitra ny mpiambina teny an-toerana. Navoakany moramora ny basy teny aminy avy eo, ary norahonany tamin’izany ilay mpiasa teo amin’ity tobin-dasantsy ity mba hanome ny vola rehetra teny aminy.
Tsy afa-nihetsika sy tsy afaka nanao na inona na inona ity niharan-doza, ka voatery nanaraka izay nolazain’ity manam-pahefana ity, ka voaroba tamin’izany ny vola manodidina ny 300 000 Ariary. Rehefa izany, dia lasa nandeha nihazo an’iny “Sénat” iny, ity farany. Teo ihany koa vao nikoropaka nampilaza sy nitantara ny zava-nisy tamin’ilay mpiambina teo amin’ity tobin-dasantsy ity ilay “pompiste” ka avy hatrany ity farany dia nanaraka ilay mpandroba avy ato aoriana. “Nahasahy nisambotra azy ilay mpiambina , moa koa teo akaiky teo ny kaomisarian’ny boriborintany fahadimy izay niditra an-tsehatra avy hatrany ka mora no nitazomana io mpitandro filaminana io”, hoy nambaran’ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny polisim-pirenena. Nentina nanaovana fanadihadiana teny amin’ny biraon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka avy hatrany moa ity farany, ka omaly ihany dia nampiakarina teny amin’ny fampanoavana ny raharaha.
Araka ny nambaran’ny teo anivon’ny polisim-pirenena ihany, dia hiroso ary hanao vaindohan-draharaha ny resaka fanadiovana anatiny izy ireo amin’ity taona vaovao ity .”Tsy milefitra amin’izay rehetra manao fandikan-dalàna mihitsy ny polisim-pirenena”, hoy ihany ny voalazan’ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ity vondron-kery ity. Ankoatra ny fanafonjana moa , dia isan’ny sazy mihatra amin’ity polisy fanetriben’ny firenena ity ihany koa ny fampiatoana azy avy hatrany amin’ny asany. Isan’ny fototra lehibe miteraka tsy fahatokisana eo amin’ny vahoaka matetika ny fisiana mpitandro filaminana voarohirohy amin’ny asa ratsy tahaka izao. Ny mampahelo anefa dia ilay vondron-kery iray manontolo mihitsy no zary lasa ratsy ao anatin’izany rehetra izany. Raha tsiahivina ihany koa dia hiaro ny vahoaka sy ny fananany no antom-pisian’ny polisy, ny zandary ary ny tafika fa tsy hanampy trotraka ny hataon’ireo jiolahy indray.
Anisan’ny fotoana naha-be resaka nandritra ny repoblika fahefatra izay notantanin’ ny Filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina ny mikasika ny lalàm-panorenana. Raha mbola mipetraka sy mitohy hatrany ny adihevitra mikasika io lalàna fototra io , dia ao ...Tohiny